6 Nzira dzeKuratidza Kuremekedza Vamwe (+ Nei Zvakakosha Muhupenyu) - Ukama
Maitiro Ekuratidza Kuremekedza Vamwe (+ Nei Zvakakosha Muhupenyu)
Zvingave zvakaoma kunzwa izwi rekuti 'ruremekedzo,' kana kuona chinyorwa chine chekuita neruremekedzo, uye usafunge nezve Mambokadzi weMweya, Aretha Franklin, akatisiya zvinosuwisa munguva pfupi yapfuura aine makore 76.
Aretha aive nebasa rinoshamisa, kuhwina 18 maGrammy Awards uye kutengesa zvinopfuura mamirioni makumi manomwe neshanu zvinyorwa pasi rese.
Ehe, rwiyo rwake rwekusaina rwaive nemusoro unoti, 'Kuremekedza.' Uye mutsara unonyanya kuzivikanwa wenziyo ndewe:
KUCHENGA-RUKA tsvaga kuti zvinorevei kwandiri
Kana paine chinhu chimwe chete chatinotora kubva murwiyo urwu, ndizvozvo rukudzo rwakakosha. Asi chii chinonzi ruremekedzo, chaizvo?
Ngationgororei izvi zvishoma, handiti?
Tinoratidza Sei Kuremekedza Vamwe?
Saka tingaratidza sei kuti tinoremekedza vamwe? Rukudzo runoratidzika sei? Tinozviziva sei kana tichizviona? Tinoziva sei kana isipo?
Zvakanaka, hapana nzvimbo yekutaura zvese zvavo kana kunyangwe mazhinji acho, asi heino nzira nhanhatu dzekuratidza ruremekedzo kwauri kuti utarise uye netariro yekuisa mukuita.
Kuteerera kune zvinotaurwa nemumwe munhu ndiyo nzira yekutanga yekuvaremekedza. Wese munhu anoda kutaura kwake. Wese munhu anoda inzwa kuti vari kutererwa . Kunyangwe ivo vane chimwe chinhu chakadzama chekutaura haisi iyo poindi. Vanhu vanoda kunzwikwa… nguva.
Kana iwe ukapa mumwe munhu nguva yako uye kutarisisa kwako nenzeve, unozvisimbisa. Izvo zvinoratidza kuremekedza.
Kupa kwekodzero dzevanhu kunotanga apo avo vasina kuteerera kune chimwe chikamu chevanhu vanotanga kuteerera. Shanduko yese yemagariro inotanga nehurukuro. Civil hurukuro.
kusiya hupenyu hwako kumashure
Kusvikira iwe wateerera kune zvinonetsa zveumwe munhu, hauzive kuti ivo ndivanaani uye chii chakakosha kwavari. Kuremekedza kunotanga ne kuteerera .
Patinosimbisa mumwe munhu, tiri kupa humbowo hwekuti vane basa. Izvo zvine kukosha. Kuti ivo vakakosha. Uye kuti vakakodzera kuremekedzwa.
Kungosimbisa mumwe munhu kunovimbisa kuti iwe unomuremekedza. Kusimbisa mumwe munhu, iwe unongofanirwa kuona chimwe chinhu chakanaka nezvemunhu iyeye uye nekutaura izvi kucherechedza.
'Waratidza kutsunga kukuru mukati memakore maviri apfuura kuti bhizinesi rako ribve pasi.'
'Wanga uine moyo murefu uye unonzwisisa pawakatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma akadaro.'
'Unondiita ndinyemwerere pese pandinokuona.'
Iwe haugone kuremekedza ese maficha ezvavari uye zvavanoita, asi iwe unogona kuvapa yakakodzera ruremekedzo padanho rinovasimbisa. Kusimbiswa inzira yakakosha yekuratidza kuremekedza vamwe.
Nyanduri weChirungu -America W.H. Auden akambotaura kuti, “Tese tiri pano pasi ku batsira vamwe chii panyika pano vamwe vasiri kuziva ini. '
Hupenyu hwepasi pano ndewe kushandira vamwe. Asi izvo, mabasa edu, mabasa edu, nemabasa edu zvinofanirwa kukomberedza chishuwo chekushandira vamwe. Kudzorera kune vamwe. Kushandisa matarenda edu uye kugona kuita kuti hupenyu huve nani kune vamwe.
Kushumira kunoratidza kuti tine hanya. Uye kuva nehanya kunoratidza kuti tinoremekedza. Kushumira chinhu chakakosha pakuratidza ruremekedzo.
4. Iva Nomutsa
Kunyangwe mutsa uye basa vari vekutanga hama, havana kufanana. Tinogona kushandira tisina mutsa. Asi zvakanyanya kuoma kuva nemutsa usina kushandira.
Kana isu tine mutsa kune mumwe munhu, tiri kuzvipa isu pachedu. Tiri kupa chimwe chinhu chavanogona kushandisa. Zvichida chimwe chinhu chavanoda. Pamwe chimwe chinhu chavanoda zvakanyanya.
Mutsa kuratidza kuremekedza. Kuremekedza chokwadi chekuti mumwe munhu ari kungoshaya. Isu tese tave tichida. Uye takazorodzwa sei apo mumwe munhu akatiratidza mutsa. Mutsa inzira inobatika yekuratidza kuremekedza.
5. Iva Netsika
Zvinotyisa kupupurira kudzikira kwetsika munyika yanhasi. Kunyangwe iri munzira huru, pamagirosa, munzvimbo yekupaka, panhandare yemitambo, paFacebook, kana munhaurwa dzezvematongerwo enyika - hurukuro ine hunhu nekudyidzana iri kukurumidza kuve hunyanzvi hwekurasa.
Asi, zviri nyore kwazvo kuva netsika. Uye inodhura zvakanyanya zvakare. Chiito chekuremekedza chinogona kuchinja chaizvo zuva remunhu. Zvinogona kana kuchinja hupenyu hwemunhu.
Inogona kusimudzira mweya yavo ipapo ipapo. Inogona kuvabatsira kuenderera mberi pane izvo zvingave zvakaoma. Dzimwe tsika munyika dzinozivikanwa nekuremekedza. Dzimwe tsika dzinozivikanwa nehutsinye.
Ndeupi anotaurirana kuremekedza uye ndeupi asingadaro? Kana iwe uchida kuratidza rukudzo kune mumwe munhu, tanga nekuremekedza.
6. Iva Nokutenda
Kana William James aive akarurama, vanhu ivavo vanoshuva kuongwa, saka kuonga ndiyo nzira yatinosimbisa nayo.
Kana mumwe munhu akakuitira chimwe chinhu icho chinobatsira. Kana ivo vanoti chimwe chinhu kwauri chinobatsira neimwe nzira. Kana ivo vanokusimbisa nokutendeseka neimwe nzira yakakosha kwauri. Unofanira vatende .
Zvekare, kuonga kuri kuwedzera kushomeka munyika medu.
Ini ndakabata musuwo wevanhu, uye vanofamba vachidarika nepasina kana kumboita sevanoona. Ini ndinorega vanhu vabude munzira yangu yekutengesa kuitira kuti vachengetedze nguva. Vanonditarisa sekunge idangwe ravo rekuzvarwa. Ini ndinobatsira vanhu mune dzimwe nzira dzandinove nechokwadi kuti dzaikosha kwavari. Asi handinzwe chinhu munzira yekutenda.
Hazvina kunyanya kuti isu tinoda kutendwa. Ndezvekuti isu tinoda kunzwa kuti izvo zvatakaita zvaita mutsauko. Kana pasina kuonga kwechimwe chinhu chatakaita, kana kunyangwe zvatiri, tinonzwa kushaya rukudzo.
Ruremekedzo haruwanzodi kuonga. Asi zvinowanzoitika. Inongova imwe nzira yatinoratidza nayo rukudzo. Inongova imwe nzira yatinonzwa tichiremekedzwa.
Nei Ruremekedzo Ruchikosha Muhupenyu
Chii chakanyanya kunaka pamusoro pekuremekedza zvakadaro? Nei zvichikosha muchirongwa chikuru chezvinhu?
zvinhu zvekuita kana wako bord
1. Kuratidza ruremekedzo ndiyo mhinduro kwayo musangano revanhu.
Imwe yemaitiro ehurongwa hwevanhu kuratidza kuremekedza kune vamwe vagari. Iko kutendiswa kwekuti dzimwe nhengo dzemhuri, dhorobha, guta, nyika, kana dunhu repasi vanofanirwa kuremekedzwa.
Universal Declaration of Human Rights yakagamuchirwa neUnited Nations General Assembly muParis muna 1948. Chinangwa chayo kwaive ipa chinzvimbo chakakodzera kuremekedzwa kuvanhu vese kwese kwese. Hapana munhu akasunungurwa.
Kuratidza kuremekedza hupenyu hwevanhu nevanhu kwakakosha kune veruzhinji nzanga nenyika yevagari.
2. Kuremekedza kunosimbisa avo vakakodzera kuremekedzwa.
Kana isu tichiremekedza vamwe, zvinotsigira kodzero yavo yekuremekedza uye kukodzera kwavo kuremekedzwa. Kune rimwe divi, patinorega kuremekedza vamwe, tinoreva kuti havana kukodzera.
Izvi zvinogona kukonzeresa kuderera kwakanyanya kunetsa kusunga uye kupera. Kamwe pazvinowanzodavirwa kuti rumwe rudzi kana dzinza kana nyika kana ruvara rweganda kana murume kana murume kana zera harikodzeri kuremekedzwa, magedhi emafashama anovhurira kushungurudzwa.
Isu takaona izvi kakawanda mumazana maviri emakore apfuura kunyanya. Mhedzisiro uye inonzwisisika mhedzisiro yekubviswa kweruremekedzo kubva kumamwe makirasi kutanga kurambwa, kwozotevera kusarura, ipapo kushungurudza, uye pakupedzisira kuuraya rudzi.
Zvinotanga nekushaya ruremekedzo. Icho chimwe chikonzero nei ruremekedzo ruchifanira kuve rwakajairika pakati pevanhu vese kwese kwese, uye nei rukudzo rwakakosha kwazvo.
3. Inokurudzira hunhu hunoremekedza.
Kana mumwe munhu achirarama nenzira inovaunzira kuzivikanwa, kukudzwa, uye kuremekedzwa, zvinokurudzira kurarama kwavo nenzira iyoyo. Kwete nguva dzose, asi kazhinji. Hunhu hunopihwa mubairo hunoda kudzokororwa.
Kana, isa imwe nzira, 'Chii chakakomborerwa chinoitwa.'
Kunyangwe isu tichishuvira kuti hunhu hwakakodzera kuremekedzwa hungave hwakajairika pasina kurudziro inopotsa pfungwa. Ingori hunhu hwevanhu kuita izvo zvinowana mubairo uye kunyara kure nezvisiri.
4. Inopa hwaro hwakasimba hwehukama.
Panofanirwa kuve nekuzeza kwakakomba kuchengetedza hukama husingape ruremekedzo. Vanhu havadi kuitirwa zvakaipa. Vanhu havadi kudzikisirwa, kudzikisirwa, kuremekedzwa, nekusaremekedzwa.
Kana hukama husina rukudzo, hunogona kunge husina hutano. Hukama hukama hwakapotsa hwagara hune kusaremekedzwa sechinhu chakajairika.
Hukama hune chinangwa, hutano, uye hunobatsira-hunoratidza kuremekedzana. Icho chakakosha.
5. Pasina ruremekedzo tinopera moyo.
Ruremekedzo rwakakoshesesa kuhupenyu hwevanhu zvekuti mukushayikwa, vanhu havafambire. Ivo havafanirwe kuve nerukudzo kubva kune wese munhu - asi kune vamwe vanhu kubva kwavari avo rukudzo runenge rwuri rwekumanikidza.
Baba wezvepfungwa dzemazuva ano, William James akati, 'Chinhu chakadzika kwazvo muhunhu hwevanhu kushuvira kukosheswa.' Avo vasingakosheswi vanonzwa vasingaremekedzwi. Zvinoodza mwoyo.
Nhoroondo yekurwira kodzero dzevagari pasi rese kurwira kuhwina rukudzo kubva kune vamwe. Ivo vekuAmerican Vanababa vakazvitaura muUnited States Chiziviso cheRusununguko nenzira iyi:
'Isu tinobata chokwadi ichi kuti chionekwe pachena, kuti vanhu vese vakasikwa vakaenzana, kuti vakapiwa neMusiki wavo nedzimwe kodzero dzinowanikwa, kuti pakati peizvi Hupenyu, Rusununguko, uye kutsvaga Rufaro.'
Kuremekedza vanhu kunosanganisira kupihwa, kuchengetedzwa, uye kuchengetedzwa kwekodzero idzi. Pasina rukudzo, kodzero idzi dzinenge dzichishaikwa. Uye kana kodzero idzi dzikashaikwa, kuremekedza kunenge kushaikwa zvakare. Varipo pamwe chete.
Saka, taona kuti chii chinonzi rukudzo. Isu taona maitiro ekuratidza ruremekedzo munzira dzinoshanda. Uye isu taona nei ruremekedzo rwakakosha.
Tinovimba hatisi kungoona chete kuti rukudzo chinhu chakakosha chehupenyu, asi isu tinoona nei zvichikosha kuti uratidze nguva dzose. Wese munhu anofanirwa kuremekedzwa kuburikidza nekuve munhu wenyama.
nzira yekupfuura munhu anokunyepera
Munhu wese anoda rukudzo. Munhu wese anofanira kuratidza rukudzo. Saka ndinovimba munhu wese achagamuchira rukudzo rwaanofanirwa, uye vachapa rukudzo rwakakodzera vamwe.
Nei Vamwe Vanhu Vane Hasha, Vasina Hanya, Uye Vasina Ruremekedzo Kune Vamwe?
Maitiro Ekugashira Vamwe Kune Zvavari (Panzvimbo Pekuti Ndiwe Waunoda Kuti Vave)
zvinoratidza kuti ane hanya newe
handigoni kuita chero chinhu nemazvo
zvekuita kana wabora mukati
haana kubvuma kuti anondida
nzira yekupfuura kupwanya musikana
zvekuita kana vanhu vachitaura kumashure kwako
zviri normal here kushaya shamwari